Meekwu ugwo kwa Pịa ntughari
A ahịa ebipụta a na-akwụ ụgwọ mgbasa ozi na-akwalite a ngwa ngwa see okwu na mgbasa ozi… a na-aga n'ihu na oku na-aga ebe a na-enyeghị ọnụego ahụ. Oops. Onye ahịa ọzọ na-agbagharị mkpụrụ okwu ugboro ugboro ebe ọ bụ na ha anaghị enweta mgbanwe. Oops… ụdị nzụta nyefere peeji nke ahụghị. Onye ahịa ọzọ jikọtara CAPTCHA n'ụdị usoro ndu… nke anaghị arụ ọrụ n'ezie. Oops.
Ndị a bụ ihe atụ niile na-efu ụlọ ọrụ ọtụtụ puku dollar na mmefu ego ọchụchọ akwụ ụgwọ. Ọ bụghị naanị na ha kpatara ego ha furu efu, ha nwekwara atụmanya na-akụda mmụọ bụ ndị nwere ike ịlaghachi azụ.
Mgbe ahia webụsaịtị ma ọ bụ ndu adịghị arụ ọrụ, ụlọ ọrụ ga na-arụtụ aka na ha online ahịa atumatu dika onye ojoo. Gị online mkpọsa nwere ike kụrụ ha zaa… ma ka na-ada n'ihi na nke ogbenye gburu na azụ-ọgwụgwụ.
Ndị a bụ usoro iri iji merie ntụgharị na akwụ ụgwọ akwụ ụgwọ
Gbaa mbọ hụ na ị nwere nchịkọta ngwọta na ebe (ma jiri ya).
Kwado ihe mgbaru ọsọ (makwaara dị ka ecommerce nsuso). Ọ bụrụ n ’ị na -achọ ebum n’uche, nye uru ọ bụla enyere akara.
rụọ ọrụ ihe mgbaru ọsọ ntọghata funnels maka nke ọ bụla tụrụ. Nyochaa arụmọrụ site na isi mmalite, mkpọsa, mgbasa ozi, isiokwu, na akụkụ ọ bụla ọzọ.
N'ime AdWords, Ad Center, ma ọ bụ Akaụntụ ndị ọzọ, jide n'aka na ntughari ntughari na-arụ ọrụ nke ọma.
Mgbe nyochaa arụmọrụ usoro, ọ bụghị naanị n'ime akaụntụ gị
Tụọ ndị ọzọ KPI, gụnyere ibiaghachi udu, nkezi peeji nke ọ bụla nleta, na nkezi oge na saịtị n'ihi na onye ọ bụla mkpọsa mmewere. Ihe na-adịghị mma na saịtị gị ma ọ bụ ihu ọdịda nwere ike imetụta mkpọsa.
Lelee ndenye ọpụpụ usoro n’onwe ya ma ọ bụ mee ka onye ọzọ mee ka Nzuzo Nzuzo ikpughe ihe isi ike.
Nwaleenụ ikike gị mezue ihe ị chọrọ (ị nwere ike ịga nke ọma mezue usoro ịntanetị ma ọ bụ rịọ katalọgụ / broshuọ, wdg). Nke a bụ ezi uche ọ bụghị naanị site na otu ọ na-arụ ọrụ echiche, ma na-enyere gị aka ịmata ahụmịhe ndị ọrụ / nsogbu eji eme ihe enwere ike idozi ma ọ bụ melite.
Ọ bụrụ na gị nso ọnụego na-adabere na-akpụ akpụ atụmanya site a azụlite mmemme, dịka email ma ọ bụ ekwentị, nyochaa nke a. Ọzọkwa, ọ bụghị ọnụọgụ ole ị na - eduga gị na-ewepụta mana ihe ị na - eme ha.
Nwere ike nweta nkwubi okwu na-ezighi ezi banyere otu i chere na mkpọsa gị na-eme nke ọma ma ọ bụrụ na ị na-enyocha usoro data ha naanị, mee na-anwale saịtị gị ihe omume.
Ofgwọ nke ihe ịga nke ọma bụ na-amụ anya ebighị ebi. Gbaa mbọ hụ na ihe dị ọrụ! Ebe nrụọrụ weebụ gị bụ akụkụ nke azụmahịa gị, ọ bụghị iche na ya. Ọ bụrụ edu ọgbọ dị mkpa, akwụsịla na nyochaa olu nke ndu gị, mana nyochaa Nsonaazụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, ebe mmelite dị mma / dị mkpa, igbu gị n'ịntanetị nwere ike ịbụ nsogbu. Emela echiche.
Tags: ebe etitiAdWordsntughari funnelsecommerce nsusoihe mgbaru ọsọ ntọghata funnelsihe mgbaru ọsọkpisedu ọgbọndu olunkwalite ahịaakwụ ụgwọ ọchụchọakwụ ụgwọ ọchụchọarụmọrụ arụmọrụppcppc akaụntụ
Aha ya bụ Simon Andrews
Feb 8, 2011 na 1:17 PM
Akwa isiokwu. “Sochie ihe ị chọrọ ka mma”
Nke a bụ ego m na-eji maka nke bi na mpaghara m nke akpọrọ nkewa ụbọchị. anyị chebere ego buru ibu mana ịhazi usoro mgbasa ozi anyị ka ọ pụta naanị n’oge awa azụmahịa. Echere m na enwere akụkọ (n'okpuru akụkụ taabụ ma ọ bụrụ na m cheta n'ụzọ ziri ezi) nke na-enye gị ohere nyochaa CPC na ọnụ ahịa ntụgharị site na elekere nke ụbọchị ka ị nwee ike kpọsaa n'oge awa kachasị elu. Anyị malitere usoro ịbawanye ọnụ anyị n'oge awa ahụ kachasị elu iji chụpụ ndị asọmpi anyị n'oge ahụ, anyị mechara belata mmefu niile site na ịme nke a ebe ọ bụ na ebumnuche ya. Ana m eme ezigbo enyi m simon na-ejikwa akaụntụ adwords anyị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgwa ya okwu naanị zitere ya ozi na simon.b@resultsdriven.org ma ọ bụ 302-401-4478. Gwa ya ndị enyi gị na Dean Jackson.